Sailthru: Optimize, Automate uye Kununura | Martech Zone
Sailthru: Optimize, Automate uye Kununura
Chipiri, Zvita 17, 2013 Chipiri, Zvita 17, 2013 Douglas Karr
Tiri kupinda muzera rinonakidza kana zvasvika kune hombe dhata uye maitiro. Mapuratifomu akaita Sailthru unogona kugadzirisa kuwanda uye musoro wenyaya yemessage iwe yauri kutumira kuburikidza nharembozha kana email - uye wozozvigadzirisa zvemukati zvesaiti iyo mushandisi ari kumhara pairi. Ndanga ndichinyora kwenguva yakareba kuti kukamurwa kwemazuva ano analytics ndeyekuti inongomutsa mimwe mibvunzo, kwete mhinduro chaidzo. Mapuratifomu ehukama seSailthru ari kuchinjisa paradigm - achitora dhata rekuongorora uye nekuvandudza ruzivo rwemuenzi kuti awedzere mari… uye achizviita otomatiki kuburikidza nekutumira mameseji uye newebhu.
Kunyange kuita uku kuchigadzira ruzivo rwevashandisi rwepamusoro nekushandurwa kwepamusoro, ndiri kuda kuziva kuti kutsvaga uye zvemagariro zvichabata sei. Kana ndiine ruzivo rwakasarudzika… mikana ndeyekuti Googlebot haina. Kana kana ndikagovana ruzivo rwangu, uchawana zvakafanana here? Pamwe, kana pamwe kwete. Tichaona… asi ikozvino, mapuratifomu ehukama ari kutyaira kushamisika kubatanidzwa uye kutendeuka. Zvinotaridza kunge zuva reiyo yakamira yega email kushambadzira chikuva chiri kumashure kwedu!
Nekutyaira zvakadzama kubatanidzwa, mapuratifomu akadai Sailthru zvakaratidzwa kuwedzera huwandu hwemari. Heano maitiro:
Dzinoshanda uye nenguva dzinokonzeresa kutaurirana - iyo Sailthru Smart Strategies mhinduro inokutendera iwe kumisikidza yakaomesesa donha mishandirapamwe yakagadzirirwa kushandisazve vashandisi vekare, kumhanyisa kudzokorora kutenga, kutora ngoro kuraswa, kupa muyedzo wakasununguka, nezvimwe panguva dzakakodzera.
Zvemukati zvemukati uye kurudziro - Sailthru's tekinoroji yekambani inoteedzera saiti, email, nhare, isingaite uye hunhu hwemagariro kukudziridza chimiro chekufarira cheumwe neumwe mutengi. Kubva ipapo, ivo vanokwanisa kungoerekana vazadza ese ekutaurirana ako nezvakanyanya kukosha zvemukati uye zvigadzirwa.
Transcend segmentation yekuwedzera yakanangwa kushambadzira - shandisa Sailthru kuvaka inesimba, akaomesesa mapoka evashandisi zvinoenderana neakawanda maitiro ehunhu anowanikwa kune wega mutengi.
Nzwisisa uye inoitisa manejimendi manejimendi - Sailthru yakajairwa mari uye peji rekutarisa metriki inopa simba kuvashambadzi uye edhiyo / ekurongedza zvikwata kuti vawedzere mushambadziro wavo wekushambadzira nekusimudzira kunoenderana nemadhora chaiwo pane kungovhura kana kudzvanya.
Tags: shandisa michinaKurwirawedzera marioptimizationoptimizePersonalizationsailthru
Iyo Yepamusoro Yemagariro Media Kukanganisa kwe2013
Tiger Pistol: Bhizimusi Diki Kushambadzira yeFacebook